Donald Trump, miliaridera, politik, filoha, USA
Donald Trump John(* 14 June 1946 New York) no mpanao politika amerikana sy 45. Filohan'ny Etazonia Amerikana, izay lasa 20. Janoary 2017. Niditra tao amin'ny Trano Fotsy izy tamin'ny taona 70 ho filoha voafidy sy tranainy indrindraary izy koa dia lasa lehilahy voalohany ao amin'ny birao tsy misy traikefa teo aloha teo amin'ny sehatra politika na tafika.
Ny kandidà ho an'ny fifidianana ho filoham-pirenena Amerikana 2016 ho an'ny Antoko Repoblika dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy 16. June 2015, ary taorian'ny nahazoany loka dia nanolotra ny biraon'ny filohan'i Etazonia nandritra ny Kongresy Cleveland tamin'ny Jolay. Amin'ny fifidianana ny 8. 2016 dia nahazo ny vaton'ny mpifidy 306 (raha ampitahaina amin'ny isa nilaina tamin'ny 270), nandresy ny mpifaninana, kandida Demokratika Hillary Clinton, ho an'ireo mpifidy ao amin'ny 232 mpifidy.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny birao, dia izy no Filoha sady Tale Jeneralin'ny Trump Organization, ka nanao raharaham-barotra. Mihazakazaka ihany koa ny hotely, casinos ary ny lalao golf manerana an'izao tontolo izao. Misaotra ny zava-misy marina anaoThe niofana(I.e.niofana) tao NBC dia lasa namana matihanina.
Tany am-piandohan'ny trompetrany dia namerina ny sasantsasany tamin'ireo dingana Barack Obama teo aloha i Trump. Niainga avy amin'ny Fifanarahana Partnership Transpacific sy avy amin'ny Fifanarahana Paris momba ny fiovan'ny toetrandro. Najanony ihany koa ny fiakaran'ny mari-pana eo amin'ny fifandraisana Amerikana-Kiobàna. Ny Filoha Trump dia nanendry an'i Neil Gorsuch ho mpikambana faha-9 ao amin'ny Fitsarana Tampony. Taorian'ny fankatoavan'ny Antenimieran'i Etazonia, nohavaozina ny mpitsara 5 ho an'ny mpitsara 4. Trump ihany koa nanangana ampahanyfandrarana lalana, izay nandràra ny olom-pirenena avy amin'ny firenena silamo enim-bolana tsy hiditra ny faritanin'i Etazonia nandritra ny telo volana, izay nanjary lohahevitra marobe. Ny ezaka ataon'ny Trump mba hanakanana na hamerana ny fandaharanasa momba ny fitsaboana ara-pahasalamana goavana ho an'ny olom-pirenena mahantra (ny so-Obamacare) dia nahitana fanoherana goavana ary tsy nahomby hatreto noho ny toe-tsaina samihafa nataon'ny senatera Repoblikana.
Tamin'ny volana, 2017 dia nandroaka ny Trump avy amin'ny talen'ny FBI James Comey. Fotoana fohy taorian'ny Sampan-draharahan'ny Fitsarana nanendry manokana Robert Mueller mpampanoa lalàna mba hanadihady ny lazaina fa fitsabahan'ny Rosiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao 2016 sy azo atao ny fifandraisana eo amin'ny Rosia sy ny filoham-pirenena mpiara-miasa Trump fampielezan-kevitra.
Fiandohana sy havana
Teraka tany Queens, New York, izy tamin'ny fahaefatry ny ankizy dimy. Ny ray aman-dreniny dia Frederic C. Trump (11. 1905 Oktobra, New York - 25. 1999 Jona) sy Mary A. Macleod (10. 1912 May, Scotland - 7. 2000 Aogositra). Ny rainy dia lasa mpanao fanorenana lehibe tao New York City. Dadabe sy i Bebe Donald Trump ny ray niaviany dia alemà mpifindra monina, izay nifindra monina ho any Etazonia in 1885. Dadabe Frederic Trump (Trump Friedrich anarany tany am-boalohany) teraka tao amin'ny tanàna kely Kallstadt divay ao amin'ny faritra, izay an'ny fanjakana alemà ny Rhineland-Palatinate. Ny renibeny dia Elizabeta Pink. Kristy. Trump dadabeny efa nahazo harena lehibe ho tompon'ny rojo ny fahaiza-mandray vahiny ankoatra ny hafa. Ao amin'ny Seattle, Washington.
Young Trump dia nianatra tao amin'ny Kew-Forest Forest tany Forest Hills, New York City, Queens. Noho ny olana tamin'ny fianarany dia nalefa tany amin'ny New York Military Academy ny ray aman-dreniny tamin'izy telo ambin'ny folo taona. Tany no nahazoany fanabeazana akademika ary nilalao tamin'ny baolina amerikana sy ekipa basketball. Avy amin'ny mpilalao basketball dia nomena ny loka 1964 izyCoach's Award. Nianatra nandritra ny roa taona tao amin'ny Fordham University izy avy eo, dia nifindra tany Wharton School avy amin'ny Oniversiten'i Pennsylvania. Taorian'ny nahavitany ny mari-pahaizana licence momba ny Toekarena sy ny Toekarena dia niditra tao amin'ny 1968 tao amin'ny Trump Organization izy.
Tao amin'ny 1977, i Donald Trump dia nanambady modely Czech Ivana Zelníčková. Ankizy telo no teraka tao amin'ny fanambadiana: Donald Jr., Ivanka ary Eric Trump.Ny lahimatoa amin'ireo ankizy, Donald Jr., dia miresaka amin'ny fiteny tseky satria manana fifandraisana akaiky amin'ny raibe sy renibeny avy amin'ny reny reniny izy amin'ny fahazazany. Hatramin'ny 1980 dia nandany matetika ny fialantsasatry ny fahavaratra tao Zlín.
Hatramin'ny volana Aprily 1978, ny Fiarovam-pirenena Czechoslovakiana dia nanara-maso ny vadin'i Ivan, Trump. Tamin'izany fotoana izany, nahazo fampahalalana momba ny fifamatoran'i Trump tamin'ny politika politika Amerikana izy tamin'izany. Ankoatr'ireo zavatra hafa dia nampahafantarina azy ny momba ny fahalianan'i Trump ny hihazakazaka ho filohan'i Etazonia ao 1988 sy 1996.
Nitsidika an'i Tsekôslôvakia tao amin'ny 1990 i Donald Trump, fony izy nanatrika ny fandevenana ny rafozan-janany, Miloš Zelníček, tao Zlín.Donald sy Ivan Trump nisara-panambadiana tao amin'ny 1992. Ny taona nanaraka, dia nanambady an'i Marla Maples, mpilalao sarimihetsika, i Trump, niaraka tamin'ny zanakavavin'i Tiffany.Nisaraka tamin'ny 1999 ny fisaraham-panambadiany. Enin-taona taty aoriana dia nanambady fanintelony i Trump, miaraka amin'ny modely Slovène sy ny mpamorona Melanie Knavs, izay nitondra ny zanak'i Barron William Trump ho amin'izao tontolo izao.
Fanombohana ny asa fandraharahana
Trump dia nanomboka ny asa aman-draharahany amin'ny orinasan'ny rainy (Trump Organization). Mba hanombohana ny raharahany manokana dia nomen'ny rainy azy vola iray tapitrisa dolara izy.Ny iray amin'ireo tetikasany voalohany dia ny famelomana indray ny toeram-ponenana ao amin'ny tanànan'i Swifton Village any Cincinnati, Ohio. Rehefa nanolotra ny rainy i Swifton Village, dia nahazo dolara amerikana an-tapitrisany ny 6.
Tao amin'ny 1980 tany New York, ny asa dia nanomboka tamin'ny famerenana ny kianjan'i Wollman any Central Park. Ilay tetikasa dia nanana drafitra fananganana anton-javatra ho an'ny 21. Na dia izany aza, 1986 dia tsy teo akaiky teo ary ny 12 dia efa nampiasa vola dolara an-tapitrisany. Tromp no nanolo-tena haka ireo asa ireo raha tsy misy ny tanàna tsy maintsy mandoa. Nolavina ilay tolotra mandra-pifantohan'ny media. Nahazo tombontsoa izy tamin'ny farany ary ny tetikasa dia nahavita iray tapitrisa dolara ho an'ny 1,95 tao anatin'ny telo volana, izay momba ny 750 000 dollars latsaka noho ny tetibola voalohany.
Tamin'ny faran'ny valo taona, niditra tao amin'ny krizy ara-bola izy. Ny fananganana ny trano fahatelo, Trump Taj Mahal, any Atlantic City (New Jersey), dia nanofana be indrindra amin'ny fampindram-bola avo lenta, izay tsy azony naverina. Ny banky sy ny tompom-bola dia namoy vola an-jato tapitrisa dolara. Ny 50% ny fananana ny karajin'i Taj Mahal dia tsy maintsy nafindra tany amin'ny tompom-pahazoan-dàlana tany am-boalohany mba hampihenana ny enta-mavesatra sy hahazoany fotoana bebe kokoa hamerenana ny trosa. Hatramin'i 1994, vitany ny nampihenany ny trosany manokana 900 tapitrisa ary koa nahenany ny trosa ara-barotra 3,5 arivo tapitrisa tapitrisa. Tao amin'ny 1995 dia niditra tao amin'ny casino tao Trump Hotels & Casino Resorts izy.
Fahombiazana sy tsy fahombiazana
Trump dia Filoha sy Chief Executive Officer (Mpitantana ambony, CEO ao amin'ny Trump Organization, izay mifandray amin'ny raharaham-barotra. Trump koa no mpanorina ny Trump Entertainment Resorts, izay mitazona casino sy trano fandraisam-bahiny manerana izao tontolo izao. Tamin'ny volana Ôktôbra 2016 dia Donald Trump's Forbes 499 magazine. ilay lehilahy manan-karena indrindra eto an-tany.
Tamin'ny taona 1991, 1992, 2004 ary 2009 dia nanambara fa mianjera amin'ny bankirompitra. Ny trangan-javatra roa voalohany dia mifandraika amin'ny trano misy azy: Trump Taj Mahal sy Trump Plaza Hotel. Indraindray izy dia nilaza fa rehefa nanamboatra ilay casinôla mahavariana izy dia sahiran-tsaina loatra.Ao amin'ny 1994, ny trosany manokana dia nihanika ny 900 tapitrisa sy ny trosan'ny fivarotana 3,5 ka hatramin'ny $ arivo tapitrisa. Tamin'izany fotoana izany dia voatery nivarotra ny orinasany sy ny orinasany ary namoy ny anjara birikiny tamin'ny orinasa hafa. Ny fanarenana ara-bola dia nanampy tamin'ny, ankoatra ny, fifanarahana mahasoa ho an'ny trano ho an'ny fampisehoana ny teny hoe "TRUMP" eo amin'izy ireo. Ny banky avy amin'ny 2004 sy 2009 dia tafiditra indray miaraka amin'ny fananany ny trano, anisan'izany Trump Taj Mahal sy Trump Hotels & Casino Resorts.
Maro ny raharaham-barotra, na tetikasa tsy nahomby efa nofoanana - oh. Airlines Trump, Trump University, Trump Magazine, Trump vodka, Trump Steaks, Trump Mortgage. Tetikasa Trump University (2004-2011) tamin'ny taona 2013 tamin'ny Martsa 2016 nomena ny haino aman-jery liana, rehefa Fampanoavana Eric Schneiderman nanomboka ny fanadihadiana, izay nifarana ny hetsika, nilaza fa ny sekoly "mirotsaka amin'ny manokana hosoka, mamitaka sy tsy ara-dalàna ny asa."Tsy anjerimanontolo izany (tokony novana ny anarana tatỳ aoriana), fa ny fandaharam-pampianarana tena lafo vidy miaraka amin'ny tombontsoa mampidi-doza ho an'ireo mpandray anjara.
Other Trump ny tetikasa dia mahasoa - oh. Trump Financial (antoka orinasa), Trump Sales sy Leasing (toeram-ponenana ny varotra), Trump International Realty (toeram-ponenana sy ny ara-barotra tena toetrany), Trump Restaurants, Go Trump (-tserasera Travel fikarohana), Select By Trump (maro kafe zava-pisotro), Trump zava-pisotro (angovo zava-pisotro ho an'ny Isiraeliana sy Palestiniana tsena), Donald J. Trump Signature Collection (-dalana ny olona ny fitafiana sy ny famantaranandro), Trump Ice (rano anaty tavoahangy), Trump Golf, Trump Chocolate, Trump Productions (TV famokarana orinasa) na Trump Home (trano fonenana).
Donald Trump manana fananana marobe any Etazonia:
Trump Tower (iray tapitrisa dolara 320 no iray amin'ireo trano sarobidy indrindra ao New York)
Trump World Tower (Fampisehoana An-tapitrisa Dolara 290 Million New York)
40 Wall Street (Trump Building, nohavaozina tao amin'ny 1930 ny tranobe trompetra 1996 tany am-boalohany. Ny tranobe dia 283 m ambony ary manana 72 etona.)
Trump Taj Mahal (ny efitrano poker amin'ny sehatry ny casino dia iray amin'ireo lehibe indrindra any Atlantic City. Ny efitrano fandraisam-bahiny dia manana efitra 1250.)
Ankoatra ireo trano sy toeram-ponenana hafa any Etazonia, Trump - angamba miaraka amin'i Ivana Trumpová, vadiny voalohany - dia manana trano lavalava any Florida antsoina hoe Mar-a-Lago koa. Ho an'ity foiben-toerany ity dia tsy maintsy tratrany amin'ny 8 izy. Ny volana septambra 2017 dia nandidy ny famindràny, tahaka ny tany rehetra, ary ny morontsiraka atsinanan'ny fanjakana any Florida sy Georgia, izay norahonan'ny rivo-doza Irma.
Ny anaran'ny Trump dia ity trano ity any ivelany:
Trump International Hotel sy Tilikambo (Toronto)
Ny Hotely Tranobe sy Tranoben'ny Palm Trump (Dubai)
Trump Ocean Club Hotel sy ny Tower (Panama City)
Trump Ocean Club Baja Mexique (tsy lavitra an'i San Diego)
Donald Trump dia nomena indroa ho an'ny Emmy Award ary nanao ny anjara asan'ny kameana amin'ny sarimihetsika maromaro (Ao an-trano 2: Very tany New York) sy serials (Nanny hijery,Izao no fotoana).Betsaka ny resadresaky ny lahateny isan-karazany. Niseho tao amin'ny fandaharana fialamboly hafa koa izy, toy ny World Wrestling Entertainment, izay nampiofanany an'i Vince McMahon niaraka tamin'ny tompon'ny fikambanana.
Tao amin'ny 2003 dia lasa mpamokatra mpanatanteraka izy ary mpandamina ny zava-misy marina momba ny zava-misyThe niofanaao amin'ny channel NBC. Isaky ny nandefasan'ity fifaninanana ity dia nisy vondron'olona iray niady noho ny asan'i Trump. Ao amin'ny andiany voalohanyThe niofanaTrump dia nahazo dolara 50 000 nandritra ny andiany iray, saingy taorian'ny fahombiazan'ilay fandaharana dia nahazo valisoa an-tapitrisa dolara i 3 noho ny fizarana iray. Taorian'ny horonan-tsarin'i 10 dia nampidiriny ny tohatraThe Apprentice Celebrityizay nahitana olo-malaza. Ny vola azon'izy ireo raisina isaky ny boribory dia nandeha tany amin'ny tetik'asa fiantrana izay nofinidin'ny tetik'adin'ny ekipa nandresy. Ao amin'ny 2007 forThe niofanaTrump dia nahazo kintana iray tao amin'ny Hollywood Walk of Fame, izay efa nandroba imbetsaka.
Trompetra aorian'ny fahombiazana dia mampisehoThe niofanadia lasa mpamokatra mpanatanteraka sy tetikasa hafa tahaka ny fifaninanana hatsikana Miss USA sy Miss Universe izay nalefa tamin'ny televiziona NBC.
Rehefa avy nanambara ny filoham-pirenena dia asao in tiany eo Repoblikana niditra tao an-firaka, Trump dia hita ao amin'ny haino aman-jery mafy kokoa, matetika amin'ny dinidinika maro isan'andro. Izy no be dia be ny fahazoana toerana sy ny fotoana ao amin'ny haino aman-jery, tsy eo amin'ny Repoblikana, fa kandidà filoham-pirenena rehetra. Media tatitra dia mifandraika amin'ny Donald Trump eo amin'ny mpanatrika tena tsara tarehy, sy ny sisa haino aman-jery vaovao tsy navelan'Andriamanitra ny fotoana natokana ho azy, izay mitana ny toeran'ny nahazo maimaim-poana noho ny fanehoan toerana ny fomba fijeriny, izay afaka mahazo ho azy tapa-kevitra maro mpifidy. Raha atambatra, dia heverina fa zava-dehibe ny haino aman-jery toerana ho azy "maimaim-poana" raha toa ka (izay mifanohitra amin'ny dokam-barotra izay tsy maintsy mandoa ara-barotra ny tahan'ny) Nahatratra 1,9-2,0 lavitrisa dolara.
Hetsika politika hatramin'ny Janoary 2017
Raha ny tena marina, nalaza be noho ny fangatahany fanodikodinana hetra ho an'ny orinasa, fanamorana ny rafitra hetra, fampihenana ny trosa federaly, ary ny fandàvany ny fifindra-monina tsy ara-dalàna.Ny politikan'ny raharaham-bahiny dia manohitra ny fifanarahana varotra malalaka ary manohana ny fiheverana fa tsy manelingelina ny firenena amin'izao tontolo izao ny Etazonia.
Tamin'ny faran'ny biraony voalohany, Barack Obama dia lasa mpankasitraka,Birthers, vondron'olona izay nitaky porofo fa teraka tany Etazonia i Obama ary mety ho filoham-pirenen'i Etazonia (jereo ny Disadisa Barack Obama). Farafahakeliny tao amin'ny fahitalavitra iray, nampanantena ampahibemaso i Trump fa raha manome ny antotan-taratasy ilaina i Obama, dia manome vola an-tapitrisa dolara ho an'ny fiantrana i 5, araka ny fahamendrehan'ny filoha.Tsy namaly an'io fanamby io i Obama.
Xunum Trump dia nanakiana ny filoha amerikana teo aloha ho fanoherana an'i Iràkaka hoy Izy: momba ny zava-mitranga any Libya, Syria sy Ejipta, ny politika ivelany an'i Barack Obama sy ny Sekreteram-panjakana teo aloha Hillary Clinton tany Afrika sy Moyen-Orient niteraka ny fahafatesan'ny "ana hetsiny".Ankoatr'izany, io volavolan-dalàna io dia nitaky vola be izay mety navoaka ho an'ny tanjona tena ilaina any Etazonia, araka ny Trump.
Izahay nandritra 4 tapitrisa tapitrisa dolara ao anatin'ny fikasana hanongana samy hafa ny olona, ​​sy manao ny marina, raha misy ankehitriny ireo, ary izahay dia afaka ireo 4 tapitrisa tapitrisa ny fandaniana ao amin'ny United States hanamboarana ny lalana, tetezana, seranam-piaramanidina sy ny maro hafa koa olana izay ananantsika, dia mety ho tsara kokoa.
Ao amin'ny 2015 Trump Chancelier alemà antsoina hoe Angela Merkel ho "izao tontolo izao angamba no lehibe indrindra mpitarika ankehitriny," fa herintaona taty aoriana Angela Merkel voatsikera mafy noho ny miarahaba ny fifindra-monina politika ao anatin'ny krizy ny fifindra-monina Eoropeana.
Trump dia manana toe-tsaina tsara amin'ny Isiraely ary nilaza fa hahafantatra an'i Jerosalema ho renivohitry ny Isiraely.Ho an'i Shina, ny tromp dia manana fifandraisana ratsy. Nitsikera ny politikan'ny varotra i Shina, izay, araka ny filazany, manimba an'i Etazonia ary manomana ny Amerikanina hiasa ary handrahona ny hampiditra andraikitra goavana amin'ny entam-barotra Shinoa.
Nandritra ny kabary izay 2015 tamin'ny Jona nanambara ny firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena ny United States, ankoatra ny hafa, nilaza izy fa amin'ny maha-filoha hanorina manda lehibe teo amin'ny sisin-tanin'i Meksika sy ny Meksikana, dia mandoa:
Rehefa mandefa ny vahoakantsika amin'ny meksikana i Mexico, dia tsy mandefa ny tsara indrindra. Tsy haniraka anao izy ireo na ianao. Maniraka olona manana olana maro izy ireo ary mitondra ireo olana ireo. Mitondra zava-mahadomelina izy ireo, mitondra herisetra, mahery setra. Saingy ny sasany - heveriko fa - dia olona tsara.
NBC Universal nanambara fotoana fohy taorian'ny izany, miorina amin'ny ny teniny ny mpifindra monina izay tsy afa-miaraka ny soatoavina amin'ny fanajana sy ny sarobidy rehetra, Trump manafoana TV rehetra dia mampiseho ny fandaharana. Ny mpandraharaha dia nilaza fa mijoro ao ambadiky ny teniny sy te hiady amin'ny gara.Any Etazonia, momba ny 11 dia trano an-tapitrisany mpifindra monina tsy ara-dalàna, ary ny ankamaroany dia avy any Meksika.
Trump mikasa ny hampitsahatra ny fanohanana ara-bola avy amin'ny federaly vola natao "tanàna fialokalofana" izay manome fialofana undocumented mpifindra monina ao amin'ny fandikana ny lalàna federaly. Ilay antsoina hoe "fitoerana masina tanàna" Nanjakazaka tamin'ny namany ny ankamaroany Demokraty, eo izay ahitana New York, Los Angeles, Miami na San Francisco, ny tanàna izay eo an-toerana kaominina dia tsy mitatitra ny Federal fifindra-monina Office illegals ka mandrara azy hanao tahaka an-toerana ny polisy.Ny Bill de Blasio, ben'ny tanànan'i New York dia nolazaina fa vonona ny handeha any amin'ny fitsarana izy mba hiaro ny "tanàna mialokaloka" avy amin'ny governemanta federaly.
Tamin'ny volana Aogositra, nilaza ny 2016 Trump fa tokony hanaiky ny fampidirana Rosiana an'i 2014 Crimea ny Amerikana raha hitondra amin'ny fifandraisana tsara amin'ny Federasiona Rosiana izany.
Ny olona any Crimée, araka izay efa henoko, dia ho any Rosia raha oharina amin'izay nisy azy taloha. Ary tokony handray an-tanana izany koa isika.
Vladimir Putin ho amin'ny fampielezan-kevitra fifidianana any Etazonia 2016 naneho ny kely indrindra, fa ny haino aman-jery mikasika ny Trump Rosiana nandritra ity nanoratra fampielezan-kevitra tsara. Trump Putin ihany koa ny nilaza fa ny "mpitarika mahery", izay izy, fa "mety mahazo teny tsara," fa tao anaty tafatafa amin'ny ABC nilaza fa ny tsy manan-Putin fifandraisana ary tsy nitsena an'i Jesosy.Nampiantrano ny fanafihana Rosiana tamin'ny mpikomy sy ny fanjakana Islamista (IS) tany Siriaary naneho fahavononana hiara-hiasa amin'i Rosia amin'ny ady atao amin'ny IS.
Taorian'ny fialàn'ny fohy ezaka fiarovana renivohitr'i mpanolo-tsaina ny Filoha Trump, Lieutenant General teo aloha Michael Flynn, izay mpisolovava ny fifandraisana tsara amin'i Rosia, mpitondra tenin'ny Trano Fotsy Sean Spicer 14. Ny volana Febroary 2017 dia nilaza fa ny Filoha Trump dia mihevitra fa i Krimea dia anisan'i Okraina ary manantena ny hamerenana an'i Rosia ho any Okraina. Spicer ihany koa ny antsoina hoe ny teny ao amin'ny Masoivoho Amerikana ho an'ny Firenena Mikambana Nikki Haley fa ny Firenena Mikambana dia nanambara fa manohitra ny sazy Rosiana dia hitoetra ao an-toerana mandra-fiverenana Crimea ho any Ukraine.
Trump antsoina hoe filoha Syriana Bashar al-Assad ho toy ny "bandy ratsy" fa hoy izy: "Tsy tiako ny filoha Syriana Bashar Assad, fa Assad dia namono mpiady amin'ny Fanjakana Islamika (NO). Novonoin'i Russia ny mpiady IS ary namono ireo mpiady IS ireo i Iran. "
Nandritra ny tafatafa taty aoriana teo anatrehan'ny vahoaka nilaza Trump hiresaka Loholona John McCain noho ny asa ara-miaramila, indrindra fa nandritra ny ady tany Vietnam: "Tsy mahery fo. Eny e, maherifo izy satria nalaina. Aleoko ireo izay tsy mbola tratra. "McCain efa nianjera ny fiaramanidina nandritra ny fanafihana tao amin'ny Rolling Hanoi nandritra ny Operation Varatra, tapaka ny tongony, dia nosamborin'ny ny Vietnamiana mpiady sy naiditra am-ponja nandritra ny dimy taona. Trump didim-pitsarana nanome fo ny adihevitra momba ny raha McCain dia ady mahery fo.
7. December 2015, andro vitsy taorian'ny fanafihana mpampihorohoro tao San Bernardino, dia namoaka fanambarana manomboka amin'ity fehezanteny ity i Trump:
Donald J. Trump dia miantso ny fampiatoana tanteraka ny fidirana Silamo any Etazonia mandra-pahitan'ireo solotenan'ny firenentsika ny zava-mitranga.
Rehefa nanontaniana momba ny fampandrosoana ny manokana izay holazaina, dia hoy izy fa hisorohana izany fa tsy mihatra afa-tsy ireo mitovy hevitra, fa ny olona rehetra manaiky ny finoana silamo, anisan'izany ny silamo izay te ho tonga any Etazonia toy ny mpizaha tany, ary koa ny raharaham-barotra mpandeha ho an'ny Silamo Amerikana miverina any amin'ny firenena iray, ohatra, avy amin'ny fialantsasatra. Trump fanambarana ity dia nihaona tamin'ny ratsy indrindra fanehoan-kevitra ao amin'ny haino aman-jery.Ny Printsy Saodiana Arabo Valid bin Talal dia nantsoina hoe Trump "Amerikana henatra". Trump dia namaly fa ny printsa dia "maniry ny hifehy ny politikantsika amin'ny volan'ny daddy" ary dia hijanona izy aorian'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana.Tamin'ny Jona 2016 Trump nihanalefaka ny toerana fa mety ho vonjimaika ihany fandrarana, izay mety ampiharina avy ihany ny olona avy amin'ny firenena "voaheloka noho ny asa fampihorohoroana an'i Etazonia, na ny mpiara-dia aminy," na firenena "fandrahonana ny fampihorohoroana."
Trump naneho hevitra manakiana ny adiresy Arabia Saodita, izay zava-dehibe fa ny olana US mpiara-tany Moyen-Orient, ary nanolo-kevitra ny mpitondra fa azo atao tompon'andraikitra amin'ny 11 fanafihan'ny mpampihorohoro. September 2001.Trump koa niantso ny Arabia Saodita mba handray anjara bebe kokoa amin'ny ady amin'ny fanjakana silamoary nandoa ny sandan'ny tafika amerikana teo amin'ny faritaniny.Avy any Hillary Clinton dia nitaky azy izyClinton Foundationnamerina ny fanomezam-pahasoavana azony avy any Arabia Saodita satria i Arabia Saodita dia mitantana ny vehivavy ho andevo sy mamono lehilahy.
Tao amin'ny adihevitra momba ny Repoblika fahaefatra tao amin'ny 2016 Trump, nilaza izy fa mety ny hiatrehana ireo mpampihorohoro, fa amin'ny fianakaviany ihany koa. Nilaza ihany koa izy fa ny mpampihorohoro dia mampiasa ny fianakaviany ho "ampinga miaina". Nandritra ny adihevitra dia nitaky ny famoretana mahery vaika ny fanjakana Silamo izy, ary nanampy koa izy fa hanao izay rehetra hampihena ny isan'ny sivily.Ny fisamborana ireo mpikambana hafa avy amin'ny fianakavian'ny mpampihorohoro dia voatsikera nataon'ny filoha Barack Obama noho ny fanafihana baomba sy ny baomba nataon'ireo zavatra samihafa mampiasa fiaramanidina tsy misy fiaramanidina.
9. August 2016 niteny Trump tamin'ny fivoriana notohanan'ny CNN tao Hillary Clinton:
Raha tonga eo amin'ny fisafidianana ny (avo indrindra) mpitsara ianao, (avy eo) dia tsy misy zavatra azonao atao momba izany, ry malalako. ... Na dia mety ho an'ny mpanohana ny fanampiny fanampiny aza - tsy fantatro.
Ny teniny dia azo adika (amin'ny tranga farafaharatsiny) ho toy ny fialan-tsiny mba hitifitra ny mpanohitra azy.Taorian'ny fandresena ny fifidianana tamin'ny Trump, dia nopotehiny ny kabary sy ny kabary nataony tamin'ny 9. November 2016 dia nidera an'i Clinton noho ny "fanentanana mafy" azy.
Tromp dia nanomboka nanjary ara-politika bebe kokoa noho ny 20 hatramin'ny taonjato fahafito. Taonjato taonany, nanohana ara-bola sy nanohana ara-bola ny fampielezan-kevitra sasany. Tamin'ny faran'ny taona 1980, ny Repoblikana dia sambany tsy nanatrika tsy ara-potoana atolotra. Amin'ny maha-mpiara-miombon'antoka ara-politika azy, Mikhail Gorbachev, izay tena liana tamin'ny fivoriana 1988 tany New York City, dia toa hita ihany koa. Trump no farany nandà ny tolotr'ireo Repoblikana. Tamin'izay fotoana izay ihany, nanomboka nieritreritra ny firotsahany hofidiana ho amin'ny taona 1996 izy, izay tiany hahatsiaro tamin'izany fotoana izany ny Repoblikana sy Demokrasiany tsy miankina.
Ny fampisehoana an'i Oprah Winfrey tao amin'ny 1988 angamba no fotoana voalohany nanontaniany raha mieritreritra momba ny kandidà ho filohan'i Etazonia izy. Nilaza i Trump, "mety tsy tsia," saingy tsy namoaka izany izy. Nanatevin-daharana ny ady teo alohan'ny fifidianana izy ho an'ny kandidà amin'ny 2000. Nanatrika ny Ben'ny tanànan'ny Antoko Reformista Amerikana izy ary nandresy tao amin'ny fanjakana roa, dia niala tamin'ny kandidà. Tao amin'ny 2014, nilaza izy fa "nieritreritra" ny fanendrena vaovao indray.
Ao amin'ny 16. June 2015 dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny kandidany ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ao 2016 ho an'ny Antoko Repoblikana. Avy eo dia nampidiriny teny filamatra teo aloha hoe "Make America Great / Great!"(tamin'ny teny anglisy"Ataovy indray Indray i Amerika").ary "Amerika Voalohany" ("Amerika voalohany'). Tamin'ny adihevitra voalohany momba ny repoblika, izy no hany tokana izay tsy nampanantena fa raha tsy nahomby izy dia ho nanohana ny mpandresy Primary ary tsy nitaky ny antoko fahatelo tsy miankina.
Amin'ny teniny manokana, izy dia nanohitra ny fanafihan'i Etazonia an'i Iràka tao 2003. Nandritra ny adihevitra fahitalavitra ny kandidà ho filoham-Repoblikana tamin'ny Septambra 2015 dia nitsikera Etazonia teo aloha George W. Bush ny filoha sy ny rahalahiny Jeb Bush, ny ady tany Iraka.
Raha nanambara ny firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena izy dia nilaza fa manana $ 8,7 mendrika vola an'arivony dolara; Araka ny voalazan'i Forbes, ny vola azony dia vola arivo tapitrisa dolara 4,5.
Vetivety dia lasa mpilatsaka ho fidiana ny antoko Repoblikana.K 3. May 2016 Trump no nahazo ny antoko 28 Repoblika sy famoriam-bahoaka (antsoina hoe "komitim-pifidianan'ny) any amin'ireo firenena sy faritany Eoropeana. Aorian'ny 3. Ny fandresen'i 2016 amin'ny Indiana, dia mametra-pialàna ireo mpifaninana roa sisa tavela - Texas Senator Ted Cruzary i Governoran'i Ohio John Kasich,ary lasa mpilatsaka ho fidiana Repoblikana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena 2016.
Eo ho eo, dimy lehibe biraom-pifidianana efa Trump in May 2016 kely aloha ny mety mitarika ny mpifanandrina amin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny kandidàn'ny Antoko Demokratika Hillary Clinton. Ao amin'ny tranonkalaReal Clear, Politika(RCP) dia novaina ho 0,2% any Etazonia. Fanadihadiana izay raiki-manohana ny Trump (isan-jato amin'ny sisiny) dia toy izao manaraka izao: Rasmussen Reports - 5%, Fox News: 3%, ABC News / Washington Post - 2%, USC Dornsife / Los Angeles Times - 3%. Clinton niantsona izay manohana ireo fanadihadiana: NBC News / Wall Street Journal - 2%, CBS News / New York Times - 6%.
Hatramin'ny faran'ny volana May, 2016 dia nanana ny Trump efa nahazo antoka ny isa vidy ilaina amin'ny fanendrena azy ho an'ny kandidàn'ny antoko Repoblikana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Araka ny Associated Press, ny isan'ireo mpanatrika 1 238 dia nihoatra ny tokotokony tamin'ny vato iray. Ireo solontena, tahaka ny Filoha Repoblika Oklahoma Rep. Pam Pollard, dia mbola niteny.
Fotoana fohy taorian'ny fanisana ny vatom-pifidianana tao amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia tonga tao amin'ny 24 ny Trump. Jona 2016 ho any Ecosse. Ny helikopterany dia tonga teny amin'ny kianja golfTrump Turnburryakaikin'ny Turnberry any atsimo andrefan'ny firenena (County Ayrshire).Taorian'ny fanambarana ny vokatry ny fitsapa-kevi-bahoaka, nilaza i Trump fa "noraisin'ny mpifidy britanika ny tanindrazany", fiovana amin'ny tenifototra manokana avy amin'ny tolona Amerikana talohan'ny fifidianana. Araka ny gazetiboky Amerikana Timelse, ny fifidianana ny brexitus dia mari-pamantarana vaovao manerana ny "ady amin'ny elit" maneran-tany (na eran'izao tontolo izao). Amin'ny lafiny iray, io ihany koa no fandresena ny trompetra manerantany.
Tamin'ny volana Jolay 2016 Trump nanao tamin'ny fanomanana ny kongresy ny antoko Repoblikana tao Cleveland any amin'ny tapany faharoa amin'ny volana izay dia tapa-kevitra taty aoriana ny antoko ofisialy kandidà ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Novambra 2016. Ny kabarin'ny mpitoraka blaogy dia nahitàna anarana roa mpanao politika izay mety ho tonga mpifaninana ho an'ny filoha lefitra amerikana, manambady. Ny tena izy, dia Governoran'i New Jersey, Chris Christie sy Indiana Governor Mike Pence.Trump nisafidy an'i Mike Pence ho mpiray tsikombakomba aminy.
Ny fifidianana filoham-pirenena avy any Etazonia
Fiomanana amin'ny fanaovana birao
Nahazo ny fifidianana 8 i Donald Trump. Novambra 2016 ary nanjary 45. Filohan'ny Etazonia any Etazonia. Ny birao dia noraisina tamin'ny fomba ofisialy 20. Janoary 2017.
Ao amin'ny 11. Tamin'ny volana Novambra, Trump avy amin'ny filoha lefitra US, Mike Pence, dia nanendry ny Mpitarika Mpitarika hanomana fitantanana vaovao. Ny ekipa dia manohy ny asany Chris Christie, Governoran'i New Jersey, Michael T. Gen. Flynn, ny mpandahateny teo aloha ny Antenimiera Newt Gingrich, dokotera sy ny mpanao politika Ben Carson, New York teo aloha no ben'ny tanàna Rudy Giuliani sy Loholona Jeff Sessions Alabama. Ny ekipa ihany koa ny filohan'ny Antoko Repoblikana Reince Priebus, lohan'ny Trump ny fampielezan-kevitra, Stephen Bannon sy ny mpandraharaha ny alemà fiaviana Peter Thiel, izay vola any Silicon Valley renivohitra. Tsy ho Donald Trump koa Jr., Ivanka Trump, Eric Trump sy Jared Kushner in-lalàna.
Ao amin'ny 13. Ny novambra 2016 no nanendry ny filoha amin'izao fotoana izao ny filohan'ny Repoblika Nasionaly Repoblikana, Rein Priebuss, ho lohan'ny lehiben'ny tranon'ny White House. Ny fanohanana tsara nataon'i Priebus ho an'ny tontolon'ny fifidianana Trump, ny fahaiza-manaon'ny fandaminana, ary ny fifandraisana tsara aminy, ohatra, ny mpitondra tenin'ireo solontenam-panjakana Paul Ryan dia nomena ny soa nataony. Nandritra izany fotoana izany ihany koa dia nanambara izy fa i Stephen Bannon, tompon'ny tranonkala Internet Breitbart.com dia ho mpanolotsaina lehiben'ny filoha (senior consultant).
Fotoana vitsy taorian'ny fandresen'ny Trump tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, 14. 2016 Novambra izy no efa natao voalohany Resaka an-tariby teo aminy sy ny Filoha Rosiana Vladimir Putin. Ireo mpanao politika roa ireo dia nampanantena fa hiara-miasa tsara. Putin nanatitra Trump fifanakalozan-kevitra fiaraha-miasa nanome fifanajana sy ny tsy fitsabahana amin'ny raharahan 'ny antoko hafa. Samy nanaiky izy ireo fa tsy mahafa-po ny fifandraisana ankehitriny eo amin'ireo firenena roa ireo. Araka ny fanambarana Kremlin, andaniny sy ny ankilany dia tsy maintsy 'hiverina any amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana takarina sy fiaraha-miasa ho an'ny soa, izay maka fiheverana ny tombontsoan'ny firenena roa tonta sy ny fiarovana sy ny filaminana eo amin'izao tontolo izao ". Ny ezaka manokana dia tsy maintsy atao eo amin'ny firenena roa tonta hiadiana amin'ny fampihorohoroana sy ny extremisma iraisam-pirenena. Nilaza ny ekipan'i Trump fa ny filoha voafidy dia niresaka tamin'i Putin tamin'ny lohahevitra maromaro. Trump dia maniry ny "fifandraisana matanjaka sy maharitra miaraka amin'i Rosia".
Shina nitoetra ofisialy hetsi-panoherana hiantso Trump filoha Taiwanese Cai Jing-wen ny 2. Desambra 2016, izay ny voalohany ofisialy ny fifandraisana eo amin'ny Amerikana sy ny Taiwan mpitarika hamaky diplaomatika fifandraisana eo amin'ny Etazonia sy ny Repoblikan'i Sina (Taiwan) in 1979, rehefa efa eo ambany Filoha Richard Nixon natao tao 1972 lehibe nanova ny fiainako any Etazonia politika an'i Shina . Hoy ny fitantanana Obama ho setrin'ny antso fa ny United States manohy manohana ny iray-Sina politika ka mba diniho ny Repoblikan'i Shina ao amin'ny nosy Taiwan faritany tanibe Shina.DiariesNew York Timesnympiambinaantsoina hoe Trump ho "fihantsiana" mankany amin'ny tanibe an'i Shina, ary mpanao politika amerikanina ihany koa nanakiana an'i Trump.Naneho hevitra tao amin'ny twitter i Trump: "Mahaliana fa i Etazonia dia mivarotra tapitrisa dolara amin'ny fitaovam-piadiana miaramila ao Taiwan ary tsy tokony hanaiky antso an-tariby aho."
Governemantan'i Donald J. Trump
Minisitry ny fambolena
Minisitry ny varotra
Minisitry ny Asa
Minisitry ny fanorenana trano
ary fivoarana an-tanàn-dehibe
Minisitry ny Raharaha Veterans
Minisitry ny fiarovana an-tanindrazana
Talen'ny biraon'ny White House
Ambasadera Amerikana ho an'ny Firenena Mikambana
Tsy ela rehefa nandresy tamin'ny fifidianana, Trump nanomboka mpiasa hiatrika olana mifandray amin'ny fanangonana ny vaovao hafa Etazonia sy fibodoana toerana manan-danja ao amin'ny fanjakana fitaovana. Folo andro taorian'ny fifidianana dia efa nanapa-kevitra amin'ny lahatsoratra telo manan-danja izy. Araka ny Minisitry ny Fitsarana vaovao nanendry loholona teo aloha Alabama Sessions Jeff. Araka ny fiarovam-pirenena mpanolo-tsaina rehefa atolotry ny lietnà jeneraly sy ny lohan'ny miaramila teo aloha counterintelligence DIA Michael T. Flynn, izay, na izany aza, tamin'ny fiandohan'ny Febroary 2017 manana izany asa noho ny teo aloha ny fifandraisana amin'ny manam-pahefana Rosiana mba hametra-pialana. Dia nosoloana ny mpanao Gen. HR McMaster, izay manana mbola tsy voamarina avy amin'ny US Antenimieran-doholona. Mpitantana ny CIA taorian'ny nandraisany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao Trump lasa Repoblikana Solombavam-Mike Pompeo.
Ny minisitra vaovao momba ny fanabeazana dia lasa Betsy DeVos avy any Michigan, izay nandalo tao amin'ny Antenimiera raha tsy tamin'ny alalan'ny feon'ny Filoha lefitra Mike Pence, 51: 50. Amin'ny maha-Ambasadaoro ao amin'ny Firenena Mikambana, i Trump dia nanendry an'i Governoran'ny Repoblika Repoblikana Repoblikana Nikki Haley, izay nifindra monina tany India avy any Inde ny ray aman-dreniny.Ny fanapahan-kevitra iray hafa dia ny fanendrena an'i Steven Munchin ho Sekreteran'ny Treasury manaraka, Goldman Sachs Banking Manager taloha.
Mpikambana iray hafa tao amin'ny governemantan'i Trump no lasa misotro ronono 66three General James Mattis ho Minisitry ny Fiarovana. Maty tamin'ny alalan'ny 98: 2 i Mattis. Nandritra ny taona 44 nandritra ny hetsika amerikana amerikana, Mattis dia nanompo tamin'ny ankapobeny tamin'ny Corps de Marine, anisan'izany ny adin'ny Irakiana sy Afghanistan.
Araka ny nambaran'ny Minisitry ny Fampandrosoana ho an'ny fonenana sy ny tanàn-dehibe, ny politisiana Afrikana-Amerikana sy ny mpifaninana trompetra teo aloha tao amin'ny kandidà filoham-pirenena filoham-pirenena Ben Carson, ilay mpandidy momba ny fonenana tany am-boalohany, dia nohamafisina.
Nambara tsikelikely ny anaran'ireo mpikambana hafa ao amin'ny Governemanta manaraka an'i Trump. Tafiditra ao anatin'izany, ankoatra ny hafa.: Wilbur Ross, ny ara-bola 78letý araka ny Varotra Minisitry, Andrew Puzder ho Minisitry ny Asa, izay, na izany aza, tsy mizara ny Antenimieran-doholona, ​​Elaine Chao, vadin'ny manam-pahefana Senatera McConnell Mitsche ny lahatsoratra Minisitry ny Fitaterana (avy any Taiwan) sy miasa hatramin'ny vao haingana mavitrika Star Jeneraly John Kelly ho Minisitry ny fiarovam-pirenena.
Ny iray amin'ireo toerana manan-danja indrindra amin'ny fitondran'ny Trump vaovao dia ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny. On 5. Ny Desambra 2016 dia nihevitra fa mety ho lasa Rex Tillerson, mpitarika amin'izao fotoana izao ao amin'ny biraon'ny orinasa lehibe Oil ExxonMobil.13. December 2016 nanamarina ny Trump mba hanolotra an'i Tillerson ho Minisitry ny Raharaham-bahiny.Nolazain'ny Antenimieran-doholona Amerikana ny fanendrena an'i Tillerson taorian'ny fandrosoana naharitra ela.
Tamin'ny faran'ny volana desambra 2016 nanendry mpanolotsaina iray hafa an'ny Trump, Amerikana miliaridera Elon Musk.15. Ny Desambra 2016 dia nanambara fa i Ryan Zinke, izay mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena ho an'ny Fanjakana Montana, dia ho lasa Minisitry ny Atitany Trump.
Trump koa dia nanambara ny fikasany hamorona lahatsoratry ny Special Envoy for International Negotiations. Io no mpanolotsaina ara-pitsarana an'i 49 taona ho an'i Jason Greenblatt, Tromp, izay jiosy, ary koa David Friedman, ambasadera ho an'ny Isiraely. Ireo fotoana ireo dia mifanaraka amin'ny fanatsarana ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'i Israely sy Etazonia taorian'ny fidiran'i Trump tao amin'ny biraon'ny filoham-pirenena, taorian'ny nifandraisan'ireo fifandraisana tamin'ny fotoana farany teo amin'ny fitondran'i Obama, dia niharatsy tanteraka.
Ny iray tamin'ireo nomena farany dia ny fanendrena ny tale ho an'ny mpiandraikitra rehetra 17 US izay manana mpiasan'ny 100 000 ary manana mihoatra ny 50 arivo tapitrisa dolara isan-taona. Dan Coats, Senatera Amerikana ankehitriny ho an'ny Fanjakana Indiana, ary Ambasadora taloha tany Berlin, dia ho lasa Danny. Ny fametrahana farany farany nambaran'ny 19. January 2017, dia ny fanendrena an'i Governoran'i 70letny governoran'i Géralin teo aloha, Minisitry ny Fambolena.Na izany aza, ity politika ity dia tsy maintsy hohamarinin'ny Sénat.
Ho an'ny 20. Janoary 2017, izany hoe, tamin'ny andron'ny fitokanana ny Filoha Amerikana Donald Trump, minisitra roa monja no nanamafy ny Loholona amerikana. Ny biraon'izy ireo dia azo raisina avy amin'i James Mattis ho Sekretan'ny Fiarovana (Pentagon Chief) sy John Kelly ho Sekreteram-panjakana Homeland Security.
Mpikambana trompetra no governemanta "manan-karena" indrindra amin'ny tantaran'i Etazonia, ary mety ho izao tontolo izao. Manana dollar maromaro eo amin'ny fitantanana, anisan'izany ny roa miliara (afa-tsy ny filoha ihany), i Willbura Ross sy Betsy DeVos. Ankoatra izany, misy ny lehiben'ny fampahalalam-baovao isan-karazany (angovo, vola, trano) tahaka ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Rex Tillerson sy ny minisitry ny fitantanam-bola Steven Mnuchin.
20. Janoary 2017 no fanokanana ny Donald Trump ho 45. Filohan'ny Etazonia talohan'ny Capitol any Washington. Narahin'ny kabarin'i Trump tamin'ny kabary fanokafana, fiara fitateram-bahoaka avy any Capitol mankany amin'ny Trano Fotsy, fombam-pivavahana fandroahana miaramila sy fikambanana hafa, ary fankalazana hafa.
21. Tamin'ny volana Janoary dia namoaka lalàna i Regula mba hanamaivana ny enta-mavesatra mifandraika amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana nataon'i Barack Obama alohan'ny nanaovana tanteraka ny programa Obamacare. Nitsidika ny foiben'ny CIA tany Langley, Virginia koa izy ary nanohana ny asany.
On 23. Tamin'ny volana Janoary, niampanga ny fanarahamasonan'ny fifanarahana fifanarahana Transpacific teo aloha i Trump.
25. Tamin'ny Janoary, namoaka didy mpanatanteraka i Trump mba hanangana rindrina eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Meksika ary nanomboka nanadihady ireo sazy an-tsokosoko tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tao 2016.
Ny fitsidihana vahiny vahiny voalohany dia nahazo ny Trump tao amin'ny Trano Fotsy tamin'ny 27. Janoary 2017. Izy sy ny praiminisitra britanika Theresa May dia nanamafy ny fifandraisana mahazendana eo amin'ny fireneny nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Fotoana fohy taorian'ny fidirana tamin'ny filoham-pirenena, 31. Janoary 2017, Trump kandidà nanendry ny toerana fahasivy eo amin'ny US Fitsarana Tampony, izay foanana 16. Febroary 2016 tamin'ny fahafatesan'ny mpitsara Antonina Scalia. Izany indrindra no nifidy toerana manan-danja 49letý mpisolovava mpandala ny mahazatra Neil Gorsuch, izay niasa hatramin'ny 2006 amin'ny iray amin'ireo 13 federaly fitsarana ambony, dia ny faharoa avo indrindra ohatra ny American rariny. Ny fanendrena maintsy ankatoavin'ny amin'ny US Antenimieran-doholona, ​​izay ho fanoherana ny ankamaroan'ny loholona demokratika voalohany inoana.Gorsuch anefa dia 7. April 2017 nohamafisin'ny Senatera Amerikana tamin'ny alalan'ny fifidianana 55: 45. On 10. April 2017 nianiana fianianana ary avy eo dia tafiditra tao amin'ny Fitsarana Tampon'i Etazonia ho an'ny fiainana.
2. Febroary 2017 nifarana Trump Resaka an-tariby niaraka Aostraliana Praiminisitra Malcolm Turnbull ny tsy ara-dalàna polo fanazavana fiaraha-mientana ifampizarana fahatapahan'ny rehefa afaka ny indroa olom-panjakana nanaiky ny fitohizan'ny ny fifanarahana momba ny famindran-toerana ny tokony ho 1250 mpitady fialokalofana amin'ny Aostraliana fanagadrana toby eo amin'ny nosy Nauru sy Papouasie-Nouvelle-Guinée ny Aostralia Ny Etazonia dia nifarana tamin'ny andron'ny filoha Barack Obama.
Ho setrin'ny 29 Iran Ballistic Test Test. 2017, 3, nanapa-kevitra ny 2 niaraka tamin'i Donald Trump. Ny volana febroary tamin'io taona io dia nametraka sazy sasantsasany tao amin'io firenena io. Ny governemanta Iraniana dia nanameloka ny fanasaziana vaovao ho tsy ara-dalàna, ary nanambara ihany koa fa hampiditra ny famerana ny fitsarana ho valin'ny olona Amerikana sy vondrona hafa nanampy ny "vondrona mpampihorohoro ao amin'ny faritra". Trump dia efa manana XNUMX. Ny volana Febroary tao amin'ny Twitter dia nilaza fa ny governemanta Iraniana dia nahazo fanairana ofisialy ho an'ny fitsapana misimisy avy any Etazonia.
4. Ny volana febroary, ny mpitsara federaly ao Seattle dia nanakana ny fahamendrehan'ny baikon'ny filoha Trump, izay nanakana ny mponina avy amin'ny firenena Muslim fito tsy hiditra ny faritany amerikana ary niteraka olana teo amin'ny seranam-piaramanidina. Tamin'ny farany, io fanapahan-kevitry ny fitsarana io dia nanamarina mpitsara roambinifololahy telo tao San Francisco. Taorian'ny andro maromaro momba ny tsy fahazoana antoka momba ny dingana manaraka, nanambara ny governemanta Trump fa tsy hitondra ity raharaha ity any amin'ny Fitsarana Tampon'i Etazonia amin'ny fanapahan-kevitra farany. Manantena ny governemanta fa ny fitondrana ny fitsarana federaly ao Seattle dia tokony hanan-kery miaraka amin'ny fitoviana misy eo amin'izao fifidianana izao ho an'ny mpanohitra (efatra na efatra).
Tamin'ny Sabotsy 4. Ny Febroary 2017 ihany koa dia niteny laharana Trump amin'ny telefaona miaraka amin'ny Filoha Rosiana Vladimir Putin. Tsy dia tena fantatra loatra ny votoatin'ity tafatafa ity. Tamin'io andro io no niantso an'i Chancellor Angela Merkel ny Trump.
11. Nilaza i Trump fa tsy namaly ny fepetra federaly izy ary nanamafy ny olana momba ny lalàna vaovao iray izay mitazona ny olom-pirenenan'ny firenena silamo voaràra tsy hiditra ao amin'ny faritanin'i Etazonia.
15. Tamin'ny volana Febroary, Trump dia nahazo ny Trano Fotsy tamin'ny Praiminisitra Isiraeliana Benjamin Netanyahu. Nandritra ny fivoriana dia nanamafy ny fanekeny ny handefasana ny masoivohon'i Etazonia any Israely avy any Tel Aviv hatrany Jerosalema ny Filoha Trump. Tamin'izany fotoana izany anefa, niantso ny "fanamafisana kely" ny Israelita tamin'ny fananganana ny tanàna Jiosy tao amin'ny faritry ny Manampahefana Palestiniana. Nanolo-kevitra ihany koa izy fa afaka manaiky ny vahaolana "fanjakana iray" sy "vahaolana roa" ao Israely sy ny faritra Palestiniana misy azy.
15 koa. Nanambara ny mpisolovava misahana ny raharaham-pitsarana sy ny fitsaràna fa ny filoha mpanatanteraka vaovao dia hotontosaina, hanilihana ny fitsipika tany am-piandohana, hisorohana ny fidirana ao amin'ny faritanin'i Etazonia amin'ireo olom-pirenena fito eto Silamo. Mandritra izany fotoana izany, io didim-panjakana io, izay natsangan'ny fitsarana federaly, dia hosoloina lahatsoratra "somary mitongilana kokoa" mifanaraka amin'ireo "didim-pitsarana diso" ireo.
25. Trump Febroary hiala ny fandraisana anjara amin'ny sakafo hariva amin'ny isan-taona ny masoivoho Gala deraina amin'ny Trano Fotsy fa efa natao 29. 2017 Aprily, miaraka amin'ny fampahalalam-baovao momba fahavalo hamely azy sy ny politika. Association iraka mpitari-draharaha Jeff Mason efa nambara fa nandritra ity dia ny sakafo hariva hankalazaina, "ny anjara asan'ny haino aman-jery vaovao tsy miankina ao amin'ny repoblika salama tsara." Rehefa avy Trump famoizana ny fandraisana anjara ao amin'ny Fikambanana ny iraka ho any Trump ny fanapahan-kevitry ny mafy nanohitra.
On 28. Ho an'ny Febroary 2017, ny Filoha Trump dia niditra voalohany voalohany teo anoloan'ny efitrano roa tao amin'ny Kongresy Amerikana. Namoaka lahateny manasongadina ny olana atrehin'ny Etazonia sy ny politikany izy. Niantso ny Repoblikana sy ny Demokraty izy hiara-miasa mba hamaha ny olan'ny firenena. Naveriny indray ny fikasany hamporisika ny famoronana asa vaovao maro ary ny fanatsarana tanteraka ny fotodrafitrasa any Etazonia, izay tsy dia tsara loatra amin'ny toerana maro. Nanitrikitrika ny amin'ny ilàna politika ara-politika hentitra izy ary nanamafy ity drafitra ity hanangana sehatra hafa amin'ny rindrina eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Meksika. Nanambara ny fanavaozana hetra izy, saingy mbola tsy nomena antsipiriany. Ho an'ny fandaniana amin'ny fiarovana, hitombo ny tetibola isan-taona amin'ny 54 miliara dolara.
On 4. Ny March 2017 dia nahatratra ny fakana an-kerisetra teo aloha teo amin'ny Filoha Donald Trumpe sy ny alahelony Barack Obama, amin'ny sehatra vaovao. Trump dia nanendrikendrehana an'i Obama, tamin'ny iray amin'ireo hafatra nalefany tao amin'ny Twitter, ny namela ny findainy hifanandrina na aorian'ny fifidianana. Na izany aza dia tsy nametraka porofo tamin'ny voalohany izy. Trump koa niantso an'i Obama "lehilahy ratsy na marary."Ny fampahalalam-baovao momba ny fanafihana Trump an'i Obama dia nentina tany Lidovky.cz. Ankoatr'izay dia voalaza fa tratratr'i Obama ny fitsidihan'i Obama matetika tany amin'ny masoivoho Rosiana ao amin'ny Etazonia Sergei Kisljak ao amin'ny Trano Fotsy. Trump dia nampiditra ny fitsidihan'i 22 Kisljak nandritra ny fitondran'i Obama, ka efatra tamin'ireo tao amin'ny 2016.Ny fanamarihana Trump na ny mpikambana ao amin'ny ekipany dia nohadihadiana, fa amin'ny 22. Martsa 2017 nohamafisin'i Devin Nunes, filohan'ny repoblika ao amin'ny Kaomity Mpanadihady ao amin'ny Kaomity Amerikana. Raha ny filazany azy, taorian'ny fifidianana Trump, dia tamin'ny volana Novambra sy Desambra 2016 sy January 2017 ny filoha. Nanangana ny governemantany i Trump, niresaka tamin'ny mpiara-miasa taminy momba ny drafitrasany, ary niantso an-telefaona tamin'ny mpitondra vahiny. Nunes, araka ny voalazan'ny Nunes, dia mety ho ara-dalàna, saingy i Nunese dia niahiahy fa ny anaran'ireo mpikambana ao amin'ny Trump dia nitatitra mivantana tamin'ny tatitra an-tserasera amin'ny sekretera miafina, izay tsy ara-dalàna.
On 17. 2017 dia nitsidika ny Filoha Alemana Angela Merkel, Filohan'ny Trump tao amin'ny Trano Fotsy, niaraka tamin'ny fiantsoana maro. Voalohany indrindra, ireo firenena roa ireo dia anisan'ireo maso efatra tao amin'ny Biraon'ny Oval ary avy eo tao anatin'ny faribohitr'ireo mpandray anjara, indrindra momba ny fifandraisana ara-barotra iraisam-pirenena. Nisy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao tamin'izany, izay natrehan'ireo solontenan'ny media maro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.Ny ampitson'io, Trump, ao amin'ny Twitter, dia namoaka ity lahatsoratra manaraka ity: "Tombontsoa goavana ho an'ny OTAN i Alemaina, ary tsy maintsy mandoa vola bebe kokoa i Etazonia noho ny fiarovan-tena matanjaka sy sarobidy atolony any Alemana!"
Donald Trump ho valifaty amin'ny fanafihana simika ao Syria, izay namono olona sy zaza am-polony maro, nandefa 7. Avrily 2017 eo amin'ny toeran'ny fanjakan'i Bashar Asad 59.Nanazava avy hatrany ny fanafihana ny filoham-pirenena Shinoa, izay nampiantrano azy tao amin'ny toeram-ponenany any Mar-a-Lago any Florida.
On 5. Ny Jolay 2017 Trump dia tonga mba hitsidika ny fanjakana hitsidika an'i Polonina. Ny diany ho any Eoropa dia mifandray amin'ny fandraisana anjara amin'ny fivorian'ny vondrona manan-danja indrindra eto an-tany firenena G20 any Hamburg, Alemaina avy any 7. ho an'ny 8. Jolay. Miaraka aminy, ankoatra ny hafa. Melanie Trump ny vadiny sy ny zanany vavy Ivanka Trump. Ao amin'ny Warsaw, dia nihaona tamin'ny solontenan'ny firenena 12 Eoropa Afovoany sy Eoropa Atsinanana izay nanatevin-daharana tao amin'ny "fandraisana andraikitra telo ranomasina" (Baltika, Adriatika sy ny Ranomasina Mainty). Ny fivoriana voalohany tamin'ity vondrona ity dia natao tao 2016 tany Kroasia. Ny ampitson'io dia ny marainan'ny fihaonana tamin'ny filohan'i Poloney Andrzej Duda. Afternoon Trump niteny teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny manam-pahefana sy ny mponina Poloney an-drenivohitra amin'ny tsangambato ny Warsaw Fikomiana mpitolona ao 1944, izay bloodily foanana ny Alemana Wehrmacht. Trump betsaka avy eo nidera ny herimpon'izy ny Poloney sy ny lava ady ho amin'ny fahafahana. Ary nanatevin-daharana ny fepetra voalazan'ny andininy faha 5 fifanarahana ho an'ny OTAN, izay miantoka reciprocity fifanarahana mpikambana mba hiaro ny tenany ivelany fanafihana. Namporisika mafy an'i Rosia hitsahatra "hanimba ny toe-draharaha" izy. Fotoana fohy taorian'ny kabariny dia tonga i Trump sy ny mpiara-mitory taminy tany Hamburg.
Tamin'ny fihaonambe G20 tany Hamburg, i Trump dia nihaona voalohany tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Putin.
On 1. August 2017 dia nankasitraka ny Senatera Amerikana Christopher Ray ho tale vaovao avy amin'ny Birao Federaly Momba ny Famotopotorana (FBI) taorian'ny fiangavian'i James Comey. Nanjary toy izany ny habetsahan'ny vato 92: 5, izay midika fa ny ankamaroan'ireo senatera avy amin'ny Antoko Demokratika dia nanohana io fanendrena ny Filoha Trump io.
Trump dia nanohana tolo-kevitra avy amin'ny Senatera Repoblika Tom Cotton sy David Perdu, izay hampihena ny fifindra-monina any Etazonia. Ny isan'ireo tompom-pahefana maitso vaovao, trano fonenana sy fahazoan-dàlana ho an'ny asa dia mety hidina amin'ny antsasa-tapitrisa tapitrisa ka hatramin'ny antsasak'olona an-tapitrisany isan-taona. Ireo mpanao lalàna demokratika dia maniry ny hanakana ity sosokevitra ity satria mety hanimba ireo mpifindra monina avy any amin'ny firenena tsy Eoropeana,izay hatramin'ny fananganana ny Lalàna momba ny Fifindra-monina sy ny Nationalité of 1965 dia anisan'ireo mpifindra monina ara-dalàna tany Etazonia.
Fifandirana sy tsikera
Fifandraisana amin'ny vehivavy
Nandritra ny fiainany tamin'ny fampahalalam-baovao, i Donald Trump dia nitsikera imbetsaka momba ny vehivavy. Ao amin'ny "Howard Stern Show" ao Howard Stern ao amin'ny 2005, ireo vehivavy dia nanome ny 1 ho 10.Ny fanambarany dia tsy hoe ny ankapobeny ihany, fa notantaraina tamin'ny vehivavy manokana ihany koa. 1996 dia miantso ny Miss Universe Alicia Machado "Miss Piggy", "sakafo mihinana" ary "Miss Housekeeping". Donald Trump dia nanafika matetika ny Amerikana mpilalao horonantsary Rosie O'Donnell, na dia nandritra ny adihevitra momba ny antoko Repoblikana tao 2015 aza.
Herintaona taty aoriana tao amin'ny 2016, tamin'ny fotoana niadiana ho an'ny filoham-pirenena, The Washington Post dia namoaka ny lahatsary 2005.Ny lahatsary dia manomboka amin'ny fifandraisana misy fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ny feon-tsarin'ny dinidinika nataon'i Donald Trump miaraka amin'i Billy Bush, mpandefa televiziona avy any an-toerana ary mitohy miaraka amin'i Trump, Bush sy Arianne Zucker mpilalao ao amin'ny NBC Universal. Tao amin'ny tafatafa iray, Trump tsy miresaka firy momba ny vehivavy ary niresaka momba ireo fanafihana ara-nofo nekeny. Tsy fantatr'i Donald Trump fa efa navitrika ny mikrônika napetrak'izy io teo aminy. Ny tena izy, dia niresaka momba ireo vehivavy nataony izy ary efa nandalo foana izy satria nalaza. Ho an'ireto fanambarana ireto, niala tsiny noho ny famoahana azy i Trump; Tamin'izany fotoana izany dia maro tamin'ireo mpanohana azy no nandao azy.Taorian'izany dia nanamafy ny teniny manokana ny vehivavy maromaro, milaza fa izy ireo no miresaka momba an'i Trump ao anaty fanoratana. Ny iray tamin'ireo vehivavy dia Natasha Stoynoff tao amin'ny gazetibokyPeople, ny fanambaràny taty aoriana dia nanamafy ny enina amin'ireo mpiara-miasa aminy.Misy horonam-peo maromaro kokoa mikasika ny hoe Trump miresaka momba ny vehivavy. Ohatra, tao amin'ny 1997, nilaza izy fa talen'ny fifaninanana "Miss Teen USA", afaka mandeha any amin'ireo akanjon'ny zazavavy izy ary mahita azy ireo tsy mitafy. Nolazainy foana tamin'ireo zazavavy fa fanaraha-maso izany. Mpifaninana maromaro no nilaza fa marina izany fanambarana izany.
1: Tromp Tower Tower
4: Tromp: Ny endriky ny fifanarahana
11: Fifidianana filoham-pirenena Amerikana 2016
12: Fiarahamiasa Transpacific
13: Ny Snake (Hira)
15: Wall Street 40
18: Kandidà ho filoham-pirenena
19: Antoko Fanavaozana ao Etazonia
22: Tromp International Hotel sy Tower (Chicago)
24: Janoary 2017
27: Fanafihana fiara ao Charlottesville
31: Politisianina amin'ny siansa
36: Initiative Sea Triple
39: Ny Trano Fotsy
40: Fitsapankevi-bahoaka momba ny mpikambana ao Angletera ao amin'ny Vondrona Eoropeana 2016
Donald John Trump (* 14 June 1946 New York) dia mpanao politika amerikana sy 45. Filohan'ny Etazonia Amerikana, izay lasa 20. Janoary 2017. Niditra tao amin'ny Trano Fotsy izy tamin'ny taona 70 ho filoham-pirenena tranainy sy manan-karena indrindra ary koa izy no lehilahy voalohany tao amin'ny birao tsy nisy traikefa teo amin'ny sehatra politika na tafika.
Trump World Tower dia trano famakiam-bokim-pahavelomana ao amin'ny 845 United Nations Plaza any Manhattan, New York, eo amin'ny arabe voalohany eo anelanelan'ny 47 sy 48 Street. Nanomboka ny fananganana tao amin'ny 1999 ary vita tao amin'ny 2001 ilay trano. Noforonin'i Marta Rudzka, mpanao mari-trano mpanao politika avy ao amin'ny Costas Kondylis & Partners Architects LLP. Ny haavon'ny trano dia 262 metatra ary ny Trump World Tower dia manana efi-trano 72 miaraka amin'ny fasika mainty maizina.
Trump Tower dia trano fialan-tsasatra any New York mijoro ao amin'ny Fifth Avenue No. 725, eo an-joron'ny 56. eny an-dalana. Ny tranoben'olona samihafa dia noforonin'ny architect Derem Scutt (Swanke, Hayden Connell) noho ny fitrandrahana an'i Donald Trump. Vita amin'ny 1983, ny tranobe dia manana 58 ety ary ny metatra 202 metatra.
Trump Tilikambo sy ny trompetra Towers no anaran'ny maromaro trano mijoalajoala, izay manana sy mifehy Donald Trump: Trump Towers IstanbulTrump Towers AtlantaTrump Charlotte - natao tilikambo tao afovoan-tanànan'i CharlotteTrump Tilikambo (Baku) Trump Tilikambo (Manila) Trump Tilikambo (New York) Trump Tilikambo (Philadelphia) Trump Tilikambo (Tampa) Trump Tilikambo (White Plains) Trump International Hotel sy Tilikambo (Chicago) - vita tamin'ny World 2009Trump Tower - New York CityTrump Towers ny Ranomasina - ho FloriděTrump Parc any Stamford, Connecticut
Trump: Ny endriky ny zava-misy dia boky nosoratan'i 1987 ho tsiambaratelo ary ho boky momba ny fivoaran'ny tena manokana. Anisan'izany ny Donald Trump sy ny mpanao gazety Tony Schwartz izay niasa hatramin'ny 1985. Nahazo ny 1 ilay boky. ny lisitr'ireo lisitry ny boky mivarotra amporisihan'i 51 nandritra ny herinandro maromaro ny New York Times. Io no boky voalohany navoakan'i Trump ary nanampy azy hahalala ny anarany any amin'ny trano tsirairay. Trump nanonona azy ho iray amin'ireo zava-bitany lehibe indrindra sy ny boky faharoa tiany indrindra ao amin'ny Baiboly.
Eric Frederick Trump (* 6 Janoary 1984 New York) dia mpandraharaha amerikanina ary zanaky ny Filoha Amerikana Donald Trump sy Ivana Trump vadiny voalohany. Tao amin'ny 2007, nanangana ny 2016 izy ary nitarika ny Eric Trump Foundation (Eric Trump Foundation). Izy no filoha lefitry ny Fikambanana Trump.
Marla Maplesová (* 27. 1963 Oktobra Dalton) dia Amerikana mpilalao sy ny vadin'i Etazonia teo aloha filoha Donald Trumpa.Životopis dia teraka ho toy ny zanakavavin'ny Real Estate mpandraharaha Edward Stanley Maples sy ny modely Laura Ann Locklear. Nianatra tany amin'ny Faritra Avaratr'i Whitfield Avaratra any amin'ny Tunnel Hill izy. 1983 dia nahazo ny lohan'i Miss Georgie. Tao amin'ny 1986 izy dia niady ho toy ny mpilalao sarimihetsika kely amin'ny anjara asa kely ao amin'ny Machine Rise.
Mike Pence (* 7 June 1959) no mpanao politika amerikana sy 48. Filoha lefitra avy any Etazonia. Teo anelanelan'ny 2013 sy 2017 izy dia governoran'i Indiana State. Teo aloha, 2001 ho 2013 dia iray amin'ireo solombavambahoaka avy amin'ity fanjakana ity tao amin'ny Antenimieran'ny Solombavambahoaka.
Ny Covfefe dia mety ho diso izay nampiasain'ny filoha amerikana Donald Trump tamin'ny bitsika nalefany avy amin'ny 31. May 2017. Ny bitsika iray manontolo dia tamin'ny teny Anglisy: "Na dia eo aza ny fanoherana tsy tapaka covfefe" (na dia eo aza ny covfefe ny fanoherana tsy tapaka). Raha toa ka tsy fantatra ny anaram-bositra nalefan'ny tweet nalefa tao amin'ny kaonty Trump dia efa tamin'ny misasakalina ny vanim-potoan'i Washington ary nofoanana rehefa afaka adiny enina. Mandritra izany fotoana izany dia lasa iray amin'ireo bitsika malaza indrindra ao amin'ny 2017 izy rehefa nifampiresaka ny olona ary nanombantombana izay tiany.
Jared Kushner (* 10 Janoary 1981, Livingston, Etazonia) dia orinasan-tserasera sy teratany amerikana. Izy no tonian'ny fanandramana New York. Ivanka Trump, zanakavavin'ny filoha amerikana Donald Trump, ny vadiny. Niaraka tamin'ireo havana hafa, i Kushner dia lasa mpikambana ao amin'ny ekipa Trumpa mba handraisany ny fahefana. Izy dia nanampy an'i Trump tamin'ny fampielezan-kevitry ny filoha mba hitazona fivoriana manan-danja, ary nanampy azy hanatratra ny mpifidy jodia ho mpanaraka ny Jodaisma Ortodoksa. Tao amin'ny 2017, i Donald Trump dia nanendry azy ho mpanolotsaina kabinetra ho an'ny Fifanarahana sy ny Afovoany Atsinanana.
Mike Richard Pompeo (* 30 Desambra 1963, Orange, Etazonia) dia mpanao politika amerikana mpanao politika. Tao anatin'ireo taona 2011 hatramin'ny 2016 izy dia mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena ho an'i Kansas. Mpanohana ny Antoko repoblikana repoblikana izy.
Ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana tao 2016 dia natao ny Talata, 8. November 2016, amin'ny 58. ny fifidianana mivantana avy amin'ny filohan'i Etazonia ho avy. Ny olom-pifidianan'ny olom-boafidy no nifidy ny mpifidy, izay nifidy ho antoko mpihidy ao amin'ny baikon'ny 45. Filoha sy 48. Filoha lefitra avy any Etazonia.
Transpacific fiaraha-miasa (anglisy Trans-Pacific Partnership, na TPP Anglisy Trans Pacific Partnership Fifanarahana, TPPA) dia multilateral fifanarahana eo amin'ny varotra ara-potoana eo amin'ny Firenena Mpikambana, izay fifanarahana taorian'ny taona maro ny fifampiraharahana ny Amerikana Obama any 2015 sy nanao sonia tamin'ny volana Aprily taona manaraka. Ve ny fifanarahana momba Japana, Broney, Malezia, Vietnam, Singapore, Aostralia, Nouvelle-Zélande, Kanada, Meksika, Chile, Peroa sy ny United States. Ny fifanarahana dia mikendry, ohatra, amin'ny alalan'ny fampihenana fanao andraikitra mba hampiroboroboana ny fivoarana sy ny fifandraisana ara-toekarena handalina, fa koa mba hampiditra asa fanamiana fitsipika. Donald Trump nanasonia ny 23. Ny filoha mpanatanteraka 2017 tamin'ny volana janoary mba hiala amin'ny fifanarahana. Tsy mbola nanamafy ny Kongresy izy hatramin'izao.
"The Snake" dia hira hira nosoratan'ny mpihira amerikanina Oscar Brown tao amin'ny 1963. Ilay mpihira 1968 Al Wilson dia nalaza noho izany. Singl, izay ny B-side no ilay hira "Willoughby Brook", dia tsy nahomby firy tany Etazonia, fa tonga tany Royaume-Uni. Tamin'ny volana 1975 dia niakatra tao amin'ny 41. ny Chart Singles Chart. Ny mpandraharaha Donald Trump dia mamaky ny lahatsoratr'io hira io ho ampahany amin'ny kandidà ho filoham-pirenena hanazava ny fomba fijeriny momba ny krizin'ny mpitsoa-ponenana ao anatin'ny tontolon'ny Ady sivika ao Syria.
Frederick Christ Trump Sr. (11. 1905 Oktobra - 25. 1999 Jona, fantatra ihany koa toy ny Fred Trump) Firenena Etazonia tena toetrany sy ny soa nataon'ny developer miasa indrindra fa tany New York City. Izy no rain'i 45. Filohan'i Etazonia Donald Trump.
Ny adiresy 40 Wall Street dia adiresy ao New York, izay manasongadina trano lehibe iray izay foiben'ny Bank of the Manhattan Company taorian'ny nahavitany azy. Tatỳ aoriana, dia nanjary fantatra teo ambanin'io anarana io izy. Rehefa nifangaro tamin'ny Chase National Bank ny mpikarakara voalohany, dia niforona ny Chase Manhattan Bank. Ankehitriny, ny trano fandraisam-bahiny dia fantatra amin'ny hoe Trump Building, aorian'ny fananganana ny 1996, izay novatsian'ny tompon'ny trano vaovao - Donald Trump. Ao amin'ny 1998, dia nosokajiana ho anisan'ny tanàna manintona ny tanàna. Amin'izao no tranobe avo indrindra any New York izao.
Twitter dia tambajotra sosialy sy mpamaham-bolongana bitika izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa sy mamaky lahatsoratra nalefan'ireo mpampiasa hafa fantatra amin'ny anarana hoe sioka. Ny dikantenin'ny "twitter" dia "twittering", "twittering", "twittering".
Jefferson Beauregard Sessions III (24 Desambra 1946) dia mpanao politika amerikana sady mpahay lalàna. Tamin'ny volana febroary, 2017 dia notendrena ho minisitry ny fitsarana amerikana tao amin'ny governemantan'i Donald Trump. Tamin'ny taona 1997 ho 2017, izy no Senateran'ny Kongresy Amerikana ho an'i Alabama. Mpikambana ao amin'ny Antoko Repoblikana izy. Avy amin'ny 1981 ka hatramin'ny 1993, izy koa dia niasa ho mpisolovava Amerikana ho an'ny Faritra Atsimon'i Alabama. Tao amin'ny 1986, tsy navotsotra tao amin'io distrika io izy noho ny mpitsara iray ao amin'ny distrika. 1994 dia nofinidin'ny minisitry ny fitsarana Alabama, 1994 dia voafidy ho Senatera Amerikana, izay voafidy indray ao 2002, 2008, ary 2014. Nandritra ny fotoanany tao amin'ny Kongresy, ny Sessions dia noheverina ho anisan'ny mpikambana ao amin'ny Antenimieran-doholona Amerikanina mafana fo indrindra.
Kandidà ho filoha dia eo amin'ny politika olona iray nanapa-kevitra ny hampihatra ny birao filoham-pirenena, nihaona tamin'ny fepetra ara-dalàna ary nanao ny dingana ilaina. Amin'ny heviny midina, ny kandidà dia heverina fa filohan'ny firenena ho kandida ho filoham-pirenena. Ny mari-pahaizana momba ny fananekena, ny fisoratana anarana, matetika ny lalàna mifehy, anisan'izany ny fepetra safidy.
Ny antoko Reformista Amerikana dia antoko politika centristista miasa any amin'ny faritr'i Etazonia. Natsangan'i Ross Perot ny 1995, izay nanambara fa ny sehatra politika amerikana dia henjana sy tsy mivoatra ary mila ny fanavaozana ilaina.
Andrew G. McCabe koa Andy (* 1968) no tale mpitantana ny FBI. Izy no talen'ny 9. Enga anie i 2017 nanendry ny Filoha Amerikana Donald Trump. Miasa ho an'ny 2 izy. August 2017, raha nianiana i Director New Christopher A. Wray, dia "niverina" ho Tale lefitra an'ny FBI izy.
Reinhold Reince Priebus (* 18. 1972 Martsa Dover, New Jersey) dia mpanao politika Amerikana, izay nanompoanay nanomboka tamin'ny Janoary hatramin'ny Jolay 2017 2017 ho talen'ny ny White House (Chief of Staff) ao amin'ny fitantanan-draharaha ny Filoha Donald Trump. Ao amin'ny 28. Jolay 2017 dia niala tamin'ity tany ity endri-javatra io, ny filoha voaroaka sy hisolo ankehitriny Sekreteram-Lasa nisy Security (sy teo aloha Marina Corps General) John Kelly. Teo anelanelan'ny 2011-2017 Priebus nanompo toy ny mpitari-draharaha ao amin'ny Komitim-pirenena Repoblikana (Repoblikana-pirenena Komitin'ny RNC) raha ny marina dia nisy ny fitantanan-draharaha lohan'ny amin'ny Antoko Repoblikana.
Trump International Hotel sy Tower, fantatra amin'ny anarana hoe Trump Tower ihany koa, dia trano fandraisam-bahiny any afovoan-tananan'i Chicago, Illinois. Ny tranobe dia nomena ny anaran'ny Amerikana multi-billionaire Donald Trump.
Paul Davis Ryan (29 Jan 1970 Janesville) dia mpanao politika amerikana ao ambadiky ny Antoko Repoblikana, manompo amin'ny 29. October 2015 ho an'ny 62. Filohan'ny Tafika. 1999 dia nipetraka tao Wisconsin tao amin'ny Antenimiera hatramin'ny XNUMX.
Janoary - Alahady 39 raha kely indrindra no maty tamin'ny fanafihana amin'ny boîte de nuit tao an-tanàna Tiorka Istanbulu.2. tamin'ny Janoary - Raha kely indrindra dia maty 60 Alatsinainy nilaza ny andian-jiolahy tao amin'ny Breziliana ady am-ponja ao Manaus. Nosamborin'ny polisy Poloney 28 olona nandritra ny rotaka tao Elk, izay nahatonga ny famonoana iray poloney zazalahy ao niady tamin'ireo mpiasa ny Toniziana kebabu.3 fivarotana. Janoary - Talata Brexit: Ivan Rogers, ny masoivoho Britanika ho amin'ny Vondrona Eoropeana, nametra-pialàna. Megyn Kelly, mpaneho hevitra ara-politika Fox News, nanambara ny fikasany niova ho NBC.5. Janoary - Alakamisy mesentery, izay noheverina aloha ny ampahany amin'ny peritoneum, dia voalaza ao amin'ny boky sy gazety ho toy ny taova vaovao ny vatan'olombelona. Hamza bin Laden, zanak'i Osama bin Laden, ny Departemantam-panjakana Amerikana tafiditra ao anatin'ny "lisitry ny eran-mpampihorohoro" .6. Janoary - Zoma 33 kely indrindra no maty tao am-ponja rotaka tao an-tanànan'i Brezila Boa Vista ao amin'ny fanjakana ny Roraima. Côte d'Ivoire tafika miaramila nirotaka tany an-tanànan'ny Bouaké, Daloa sy Korhogo. Raha kely indrindra dia olona dimy no maty tamin'ny fanafihana Esteban Santiago-Ruiz semi-mandeha ho azy fitaovam-piadiana amin'ny seranam-piaramanidina tao Fort Lauderdale-Hollywood Floridě.7. Janoary - Asabotsy 40 raha kely indrindra no maty tao amin'ny fanafihana famonoan-tena tao an-tanàna Syriana Azaza akaikin'ny sisin-tanin'i Torkia. Tamin'ny faha-92 taona dia maty ny teo aloha portogey Filoha sy ny Praiminisitra Mario Soares.8. Janoary - Alahady Tao Jerosalema dia nisy fiampangan'ny kamiao ary vehivavy telo no maty ary lehilahy iray no maty. Ny hafa no naratra. 9. Janoary - Alatsinainy teo ny faha-91 taona dia maty ny Jiosy Zygmunt Bauman mpahay fiarahamonina (sary). Ny la musique La La Land dia nomena ny lokan'ny 74 Best Film. Gazety Golden Globe. Ao amin'ny governemanta Irlandy Avaratra latsaka rehefa misolo tena ny Minisitry Voalohany Martin McGuinness (Sinn Féin) nametra-pialàna ny funkci.10. Janoary Talata - ho any Polonina tonga taloha arivo US andian-tafika mba hanamafisana ny atsinanana flank ny OTAN ao amin'ny Operation Atlantic Hanapa-kevitra (Atlantic tapa-kevitra). Ity no valin'ny fananganana Rosiana an'i Krimea sy ny ady tany atsinanan'i Okraina.
Christopher Asher Wray (* 17 Desambra 1966) no talen'ny FBI. Nandritra ny taona 2003 ho 2005 dia niasa ho Lehiben'ny Fampanoavana izy ary niandraikitra ny fizarana heloka bevava teo ambany fitondran'i George W. Bush. Avy amin'i 2005 ka 2017, mpiara-miasa amin'i King & Spalding izy. 7. Ny Filoha 2017 June dia nanambara ny fikasany hanendry an'i Wraye ho talen'ny FBI. . Nohamafisin'ny senatera 1 izany. August 2017 miaraka amin'ny 92 - 5., Fianianan'ny 2. August 2017.
James N. Mattis (* 8 September 1950, Pullman, Etazonia) dia politisiana ary General General Corps General. Mpitarika efa ela teo amin'ny tafika Amerikana tao Iraka sy Afganistana izy. Hatramin'ny volana Janoary, 2017 dia mitazona ny lahatsoratry ny Sekreteram-panjakana Amerikana ao amin'ny fitantanana Donald Trump.
Ao amin'ny 12. Tamin'ny volana Aogositra, 2017 dia notafihan'ny fiara iray tao Charlottesville, Virginie. 20 ilay zatovolahy dia nitondra fiara ho vondrona mpanao fihetsiketsehana. Voampanga ho nanao heloka maromaro izy, anisan'izany ny famonoana olona faharoa. Ny media momba ity zava-nitranga ity dia niteny fa fanafihana tsy nahy na mpampihorohoro.
Ny Miss Universe dia fifaninanana hatsaran-tarehy iraisam-pirenena natao isan-taona hatramin'ny 1952. Miara-miasa amin'ny fifaninana Miss World izy ho toy ny sehatra manan-danja indrindra amin'ny karazany eto amin'izao tontolo izao.
Boeing 757 dia fiaramanidina fiaramanidina jiro anankiroa natao ho an'ny andalana fohy sy midina. Ny voalohany novokarin'ny Boeing Model 757 dia natomboka tamin'ny sidina test 19 voalohany. Janoary 1982 avy amin'ny Renton Airport.
Inishturk (Irish Inis Toirc, midika hoe "nosy volontany") dia nosy iray any amin'ny faritanin'i Mayo any amin'ny faritanin'i Connacht any Irlandy. Ny nosy dia mipetraka tanteraka amin'ny 18. Ny jeografia an'i Inishturk dia ao amin'ny Oseana Atlantika, 14,5 km any andrefan'ny morontsirak'i Irlandy. Ny nosy akaiky indrindra dia ny nosy Caher tsy nisy mponina, izay eo anelanelan'i Inishturk sy Clare Island eo amin'ny fidirana ao Clew Bay. Ny nosy lehibe iray hafa any amin'ny ranon'i Atlantika manodidina dia Inishboofin any atsimoandrefana. Ny tanjona ambony indrindra any Inishturk dia mahatratra metatra 189.3 (mijanona ny 621.1). Any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy no misy ny tilikambo 100 m ambony.
Ny politika mifototra amin'ny siansa dia fomba iray hampidirana ny siansa amin'ny tanjona ara-politika sy ara-tsosialy hafa. Tantara, hatramin'izay, ny siansa dia natao tamin'ny lamina politika. Tahaka ny zavakanto (techno). Ohatra, niasa tamin'i King Hieron i Archimedes ary namorona milina ady ho azy. Na i Leonardo da Vinci, ankoatra ny zavakanto, dia nanamboatra teknolojia isan-karazany (niasa ho an'ny Medici na ny Papa).
Catherine Smržová (* 26. 1980 Septambra in Prague, Tsekôslôvakia) dia Czech modely sy ny mpihazakazaka-up voalohany Repoblika Czech 2002.Život In 2002 no nanatrika Czech fifaninanana hatsaran-tarehy sy ny Repoblika Czech Miss napetraka ho mpihazakazaka-up voalohany. Ny Repoblika Tseky dia nisolo tena ny Miss Universe tamin'ny fifaninanana hatsaran-tarehy iraisam-pirenena, izay farany ny 7. December 2002 tany Londres. Tsy nahomby izy. Avy eo izy dia efa nisolo tena ny firenentsika amin'ny fifaninanana hatsaran-tarehy ny iraisam-pirenena Miss Universe, izay natao 3 famaranana. June 2003 ao Panama. Nampidiriny tao amin'ny 8 izy. toerana. Taorian'ny fahombiazany tamin'ny fifaninanana Miss Universe, nandeha niasa tao New York izy. Nahita an'i Donald Trump, amerikana milyaona izy, ary nanolotra ny asany tao amin'ny sampan-draharahany.
Kevin Stephen "Steve" Bannon (* 27. 1953 Novambra, Norfolk, USA) dia Amerikana mpandraharaha sy mpanao politika, fantatra amin'ny hery farany ankavanana hevitra, izay nihazona ny lahatsoratra ny mpanolotsaina sy mitàna ny toeran'ny lehiben'ny tetikady Filoha Donald Trump teo anelanelan'ny Janoary sy Aogositra 2017.
Allan Lichtman (* 4. 1947 Aprily) dia Amerikana mpampianatra ara-politika tantara izay mampianatra ao amin'ny Oniversite Amerikana any Washington, DCJe mpiara algorithm antsoina hoe "Telo ambin'ny folo Fanalahidy", izay nanomboka tamin'ny 1984 foana tsara mialoha ny vokatry ny Amerikana filoham-pirenena voleb.Třináct key algorithm "Telo ambin'ny folo Fanalahidy "mifototra amin'ny fianarana ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana hatramin'ny 1860. Lichtman nanoratra azy tao amin'ny boky telo ambin'ny folo Fanalahidy ny Fiadidiana (telo ambin'ny folo Fanalahidy ho an'ny Fiadidiana) sy ny Torohevitra Hahasambatra ny Trano Fotsy (Ny Fanalahidy ho an'ny Trano Fotsy). Ny fampandrosoana no niara-niasa tamin'ny Rosiana Vladimir mpahay matematika sy ny seismologist Keilis-Borok (1921-2013), izay tany am-boalohany mialoha nataonareo tamin'ny horohoron-tany.
Hotel Plaza (anglisy Plaza Hotel) dia devatenáctipatrový lafo vidy Hotel hita akaikin'i Central Park South any Manhattan, New Yorku.Rozměry sy ny toerana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia avo 76 122 M M ela. Izany no misy amin'ny lafiny andrefana ny Grand tafika Plaza, izay nisy iombonana anarana. Eo amin'ny ilany atsinanan'ny Grand Army Plaza, dia mitsambikina ny 5th Avenue Arterian Manhattan. Hatramin'ny 1988 dia nanana Donald Trump. Trump dia nividy hotely ho an'ny 407,5 tapitrisa dolara, izay ankehitriny [rehefa?] Around 824 tapitrisa dolara.
Ny Initiation Three Seas dia fikambanana tsy ara-dalàna amin'ny firenena roa ambiny ao Eoropa Afovoany sy Atsinanana. Ny tanjona dia ny hiara-miasa amin'ireo firenena any amin'ny faritra samihafa ary hampifandray ny faritra any amin'ny faritra avaratra-atsinanana.
Waterboarding dia teknika ampiasaina mba hanerena ny fitanisan-keloka na ny vaovao. Tsy nampiasaina nandritra ny Espaniola Inquisition (14. Taonjato) sy ny androany (2009) no Amnesty International heverina ho karazana fampijaliana, raha mbola teo aloha US Filoha lefitra Dick Cheney Niantso azy io hoe "ny mahasoa loharanom-baovao" sy McCarthy, talen'ny an'ny ady Center sy teo aloha mpampanoa lalàna any Etazonia , mandray ny fomba fijery fa waterboarding mba tsy ho latsaka ao anatin'ny famaritana ny fampijaliana.
James Brien Comey, Jr. (* 14. 1960 Desambra, Yonkers, New York, any Etazonia) dia mpisolovava avy any Etazonia, tale teo aloha sy ny FBI Minisitra lefitra teo aloha spravedlnosti.Mládí, ny fanabeazana sy ny rodinaNarodil in Yonkers, New York, fa lehibe tany Allendale, New Jersey. Nahazo diplaoma avy any Avaratra izy Highlands faritra High School any Allendale, ary nahazo diplaoma avy amin'ny College de William sy i Maria tamin'ny simia sy ny fivavahana. Ny farany thesis nandinika ny liberaly Reinhold Niebuhr teolojianina sy ny mpandala ny mahazatra televangelist Jerry Falwell, amin'ny fanamafisana eo amin'ny mahazatra finoana asa-bahoaka. Koa satria 1985 no mpitondra ny Juris Doctor mari-pahaizana rehefa nahazo diplaoma avy amin'ny sekoly fianarana lalàna tao amin'ny Oniversiten'i Chicago.
Ny Trano Fotsy no seza sy toeram-piasan'ny filoham-pirenen'i Etazonia, izay iainan'ny fianakaviany eto. Tranom-bazana faramparan'ny baolina kitra Zeorziana. Ao Washington, DC any amin'ny 1600 Pennsylvania Avenue NW izany. Ny teny hoe White House dia matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana ny tenany, fa koa amin'ny fitantanana ny filohan'i Etazonia. Ny trano dia zokin'ny taona 200, i John Adams, filohan'i Etazonia, no filoham-pirenena voalohany nipetraka tao amin'ny Trano Fotsy. Ny fanorenana ny Trano Fotsy dia nanomboka tamin'ny 13. Ny Oktobra 1792 sy fanavaozana maro dia natao nanomboka teo. Nolavin'ny Ady Britanika-Amerikanina voalohany (foton'ny taona 1812, Ady faharoa Fahaleovan-tena Amerikana), ary ny White House 24 no fotsy voalohany. Feo 1814 tamin'ny volana aogositra. Nisy fanitsiana lehibe natao tao amin'ny 1961, rehefa nividy trano sy trano vaovao i Jacqueline Kennedy. Afaka nanavao ny trano manontolo tao anatin'ny herintaona. Nanangana tranom-bakoka ho an'ny tantaran'ny Amerikana eto izy miaraka amin'ny sarimihetsika portratsin'ny filoha. Ny Trano Fotsy dia ahitana birao ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana, studio, TV, solarium, dobo filomanosana ary fialofana amin'ny baomba nokleary. 2017 dia niaina tamin'ny 45 nanomboka tamin'ny Janoary. Filoha Amerikana Donald Trump.
Ny fitsapa-kevi-bahoaka momba ny maha-mpikambana ao amin'ny United Kingdom ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia fitsapa-kevi-bahoaka natao tao amin'ny United Kingdom and Gibraltar tamin'ny 23. June 2016, izay nanehoan'ny olom-pirenena ny fomba fijeriny momba ny maha-mpikambana ny fanjakana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Mpifidy nifidy iray tanteraka ankamaroan'ny vato 17,411 tapitrisa (51,9%) ho an'ny antsoina hoe brexit (avy amin'ny teny anglisy "British" sy "fivoahana" Britanika lasa), dia toy izany no hivoaka ny Union. Ireo mpanohitra ny mpikambana Britanika ao amin'ny Vondrona Eoropeana (EU) dia nahazo ny 308 avy amin'ny fari-piadidian'i 382. Nifidy ny handao ny taona 43 taona ho an'ny mpikambana ao amin'ny EU ireo mpifidy.
Elizabeth Dee "Betsy" DeVos (tsy misy dikany, Betsy DeVos, Prince Prince, * 8 Janoary 1958) dia mpanao politika Amerikanina ho an'ny Antoko Repoblikana, avy amin'ny 7. Febroary 2017 Minisitry ny fampianarana ao amin'ny governemantan'i Donald Trump. Nosoloany an'i John King Jr izy. avy amin'ny governemantan'i Barack Obama.
Jerome Hayden Powell (* 4. Febroary 1953, Washington DC) dia Amerikana mpisolovava sady mpikambana ao amin'ny Biraon'ny mpanapaka ny Federal Reserve System (Biraon'ny mpanapaka ny Federaly Reserve Board, nohafohezina matetika "Leo"), Etazonia, izay manompo nanomboka 2012. Ao amin'ny 2. Novambra 2017 Donald Trump nanendry ny Filoha Powell toy ny mpitari-draharaha ny Federaly Reserve Janet Yellen ho mpandimby. Raha hamafisina ny US Antenimieran-doholona, ​​Powell tsy miova ny toerana vaovao 1 andro. Febroary 2018.
Paul D. Miller dia American-pianarana, CIA mpandalina, bilaogera sady mpanolotsaina fahiny ny Filoha George W. Bush sy Barack Obama tao amin'ny faritr'i Afghanistan eo amin'ny Filankevitry ny National Security, izay any 2012 soa aman-tsara mialoha ny Rosiana tsehatra ao Okraina, izay nanomboka tao 2014. Tale lefitra ihany koa i William P. Clements, Jr. Center for National Security ao amin'ny Oniversiten'i Texas any Austin, mpahay siansa ara-politika tao amin'ny Rand fikarohana Corporation andrim-panjakana, mpiandraikitra ny faharanitan-tsaina Etazonia teo aloha sy ela nihetezana ny ady ao Afghanistan.
Donald John "Don" Trump Jr. (* 31 December 1977 New York) dia mpandraharaha Amerikana. Izy no lahimatoa amin'ny 45. Ny Filoha Amerikana Donald Trump, ary ny modely tchika Ivana Trump. Miara-miasa amin'ny Ivanka Trump rahavaviny izy ary i Eric Trumpe rahalahiny, ho filoha lefitra mpanatanteraka ny Trump Organization, natsangan'ny rainy.
Marie Ivanka Trump (* 30. 1981 Oktobra in New York City, New York, United States) dia mpandraharaha Amerikana sy Donald Trump modelka.Svému rainy nanampy tao amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2016. Koa izy niasa ho toy ny mpikambana ao amin'ny ekipa manomana 16členného fitantanana Trump fiadidian'ny.
Ivana Trumpová, teraka Zelníčková, (* 20 February 1949 Zlín) dia mpandraharaha amerikanina Czech, mpitrandraka taloha sy modely. Tamin'ny taona 1977-1991, i Donald Trump no vady voalohany tamin'ny mpandraharaha ary filohan'i Etazonia tatỳ aoriana.
Ariana Tiffany Trump, teraka anarana Ariana Tiffany Trump (* 13. 1993 Oktobra West Palm Beach, Florida) dia aterineto Amerikana olo-malaza sy ny zanakavavin'i filohan'ny Etazonia Donald Trump sy ny vadiny faharoa, Marly Maplesové.
Melania Trump, nepřechýleně Trump, teraka anarana Melanija Knavs, germanised: Melania Knauss (* 26. Aprily 1970 Novo Mesto) dia teo aloha Slovenianina modely, endrika firavaka sy ny famantaranandro, izay tamin'ny Janoary 2017 mitana ny anjara asan'ny Voalohany Lady ny Etazonia ho vadin'i US Filoha Donald Trump.
Trump dia mety midika hoe: příjmeníDonald Trump (* 1946) - Baiboly mpandraharaha, mpilalao sarimihetsika sady mpanoratra, ray Ivanka 45. Filoha USAIvana Trump (* 1949) - Baiboly mpandraharaha, reny IvankyDonald Trump Jr. (* 1977) - Baiboly mpandraharaha, zanak'i Donald sy IvanyIvanka Trump (* 1981) - Baiboly modely sy ny mpandraharaha, zanakavavin'i Donald sy IvanyKelly Trump (* 1970) - Alemaina pornoherečkaJudd Trump (* 1989) - British mpilalao snookerujiný významTrump Tower - maro zavatra ( hotely, trano haavo)